Ukhwantalala i-Orlando Pirates idliwa - Ilanga News
Home Ezemidlalo Ukhwantalala i-Orlando Pirates idliwa
Ukhwantalala i-Orlando Pirates idliwa
IChiefs izabalaze kanzima ibambana neStellenbosch FC ngo-1-1
UTHABO Nodada weCape Town City ebhekene noPaseka Mako wePirates ehlulwe ngo-1-0 izolo eLoftus Stadium.
LIQHUBEKILE ishobolo le-ezinkunzini zaseSoweto njengoba i-Orlando Pirates ihlulekile ukunqoba imidlalo selokhu kubuywe ekhefini lokumiswa kwayo ngenxa yeCovid 19 ngesikhathi ihlulwa yiCape Town City ngo-1-0 kowe-Absa Premiership izolo ngeSonto ntambama eLoftus Stadium, ePretoria. Ngakolunye uhlangothi iKaizer Chiefs ibambane neStellenbosch FC obekubhekwe ukuba izidlulele kalula kusona.
Emdlaweni wePirates igoli le-City libhakuziswe enethini nguKermit Erasmus ngomzuzu ka-45, kwathi koweChiefs igoli leStellies lavalelwa enethini nguLeletu Skelem ngomzuzu ka-36, lacinywa ngelikaLazaurus Kambole ngoka-69.
IBucs ihlulwe kulo mdlalo nje, igijime ngabadlali abaningi kuneCity isikhathi eside emuva kokuba kukhishwe ngekhadi elibomvu uMpho Makola ngomzuzu ka-33.
U-Erasmus ubuye wayibhakuzisa inethi ngomzuzu ka-72 kodwa kalaze labalwa ngenxa yokuthi ubekade esesemhlabeni ongafanele.
Selokhu kubuye imidlalo iBucs kayikaze inqobe okwenze aphela nya amathuba okuzama ukulwela isicoco seligi okubukeka sizogcina sihambe neKaizer Chiefs.
UTaariq Fielies weCape Town City uqokwe njengomdlali ovelele kulo mdlalo kanti ubonge ukubambisana nozakwabo okwenze bathola lo mphumela omuhle.
IPirates emdlalweni ozayo izodudulana neSuperSport United ngoMgqibelo kanti ngosuku olufanayo iCity izogadulisana neLamontville Golden Arrows.
Kubukeka iPirates kuyishaya kakhulu ukugijinywa kwemidlalo ngaphandle kwabalandeli kwazise kayilutholi ugqozi olukwazi ukucindezela izitha zayo. Nokho kakuyona iBucs kuphela enale nkinga kwazise wonke amakilabhu adlala ngaphandle kwezihlwele.
UFielis ubonge ozakwabo ngokuzikhandla kulo mdlalo njengoba iCity iqinise indawo yayo kwi-top 8 kwathi iPirates yalala endaweni yesihlanu.
UFielies uthe umklomelo wokuba ngumdlali wosuku uwunika ozakwabo ngokudlala ngokuzikha-ndla ekubeni bawuqede lomdlalo bengasaphelele.
Khonamanjalo, ngoLwesihlanu iPolokwane ibambane neHighlands ngo-1-1 kwathi iBaroka yaguqiswa yiChippa ngo-1-0.
Previous article“Ngifisa ukube ngasikhipha isisu”
Next articleOwoKhozi uqophe nabakacothoza